Costa Rica Oo Ku Tumatay Uruguay
HomeWararka MaantaCosta Rica Oo Ku Tumatay Uruguay
Xulka qaranka Costa Rica ayaa dhirbaaxo ku dhuftay oo ka yaabiyey xulka qaranka Uruguay , kagana badiyey 3-1 , ciyaartii koowaad ee Group D ee caawa.
Rigoodhe madi ah oo uu dhaliyey Edison Cavani oo ay hogaanka ku qabatay Uruguay kadib dib looma arag ee ciyaarta waxa la wareegtay Costa Rica oo u muuqatay mid koobka aduunka si fiican ugu soo diyaar garowday .
Goolkii barbardhacana waxa shabaqa u dhigay weeraryahanka naadiga Arsenal ee Joel Cambell, waxaana u labeeyey Oscar Duarte kubad madax ahayd , Uruguay waxay qoosatay oo u saddexeeyey Marco Urena, iyagoo indhohoodu shan yihiin.
In kasta oo uu ka fadhiyey oo dhaawac kaga maqnaa Suarez hadana xulka Uruguay , jamaahiirtiisii way u dhamayd ,oo waxaa meesha marayay Forland , Cavani iyo xidigii caanka ahaa ee xulka oo dhamaystiran, laakiin ma noqon kuwo ka difaaca , xulka aan awooda badan laga filayn ee Costa Rica.
Aakhirkii Uruguay oo xanaaqday waxaa kaadhka casaanka ah laga siiyey Maxi Parriera, ciyaartiina waxay ku dhamaatay 3-1 ay guushu ku raacday Costa Rica.
Group D oo ay ku wada jiraan , Uruguay, Costa Rica, England iyo Itlay , ayaa ciyaarta kale ee mardhow waxaa fooda isku dari doona laba xul ee awooda Badan , Ingiriiska iyo Talyaaniga…..